Solomon Dwom 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Solomon Dwom 5:1-16
5 “Me nuabea,+ m’ayeforo,+ maba me turo mu.+ Matetew me kurobow+ aka m’aduhuam ho. Madi me wokyɛm aka ɛwo+ ho, na manom me nsã aka me nufusu ho.” “Nnamfo, munnidi! Monnom ɔdɔ na ɛmmow mo!”+ 2 “Mada nanso me koma anyan.+ Mate sɛ me dɔfo rebɔ pon mu!”+ “Bue me,+ me nuabea, me komam hemmaa, m’aborɔnoma a wudi mũ!+ Obosu ayɛ me tirim mã, anadwo bosu+ afɔw me ti nhwi.” 3 “‘Hwɛ, mayi m’atade; mɛyɛ dɛn ahyɛ bio? Mahohoro me nan ho; mɛyɛ dɛn ayɛ ho fĩ?’ 4 Afei me dɔfo twee ne nsa fii ɔpon no ano tokuru mu, na me yam+ hyee me. 5 Na mesɔree sɛ merekobue me dɔfo, na me nsa ho kurobow ne me nsateaa ho kurobow nsunsu sosɔ guu krɔkrɔ no ho. 6 Mibuei sɛ me dɔfo mmra mu, nanso na me dɔfo adan ne ho, watwam kɔ. Bere a ɔrekasa no, me ho mmoa nyinaa guanee. Mehwehwɛɛ no, nanso manhu no.+ Mefrɛɛ no, nanso wammua me. 7 Awɛmfo+ a wɔnam kurom no bɛtoo me. Wɔbobɔɔ me pirapiraa me. Awɛmfo a wɔwɛn afasu+ no yii me nkataanim. 8 “Yerusalem mmabea,+ meka ntam gu mo so+ sɛ sɛ muhu me dɔfo a,+ monka nkyerɛ no sɛ ɔdɔ ho anigyina abɔ me yare.”+ 9 “O mmea mu ɔhoɔfɛfo,+ dɛn na wo dɔfo de sen ɔdɔfo foforo?+ Dɛn koraa na wo dɔfo de sen ɔdɔfo foforo a enti woaka ntam a ɛte sɛɛ agu yɛn so yi?”+ 10 “Me dɔfo te sɛ ahwehwɛ, na ɔbere. Mmarima mpem du gyinagyina hɔ a, ɔda nsow.+ 11 Ne ti yɛ sika, sika kɔkɔɔ a wɔapa mu. Ne ti nhwi yɛ adobɛ aba, na ɛyɛ tumm sɛ kwaakwaadabi. 12 N’aniwa te sɛ mmorɔnoma a wɔwɔ nsu ho, mmorɔnoma a woguare nufusu mu a wosisi asukɔn so. 13 N’afono te sɛ turom akofi a aduhuam ayɛ so mã,+ abantenten a wɔde nnuhuam ahyehyɛ. N’ano yɛ sukooko a ɛsosɔ kurobow.+ 14 Ne nsateaa yɛ sika kɔkɔɔ a wɔde sikaberebo ahyehyɛ mu, na ne yafunu yɛ asommɛn a wɔde hoabo adura ho. 15 Ne nan yɛ abohemmaa adum a ne nnyinaso yɛ sika kɔkɔɔ. N’ahoɔfɛ te sɛ Lebanon, na ɔda mu fua te sɛ kyeneduru.+ 16 Ne dodom yɛ adɔkɔdɔkɔde, na ne ho biribiara yɛ anika ara nko.+ Yerusalem mmabea, oyi ne me dɔfo, m’adamfo a minni ne ho agoru.”
Solomon Dwom 5